I-China kwikota yesithathu ibona urhwebo lwangaphandle lwandisa abenzi nabathengisi Amanzi eTspring
Urhwebo lwangaphandle lwase China lwandisiwe kwikota yesithathu ukuya kwirekhodi ephezulu, lwenza ukuba ukukhula okuthe tye unyaka nonyaka kuthengiso kunye nokungenisa elizweni kuguquke kokubi ukuya kokuqinisekileyo, ngokweenkcukacha zamasiko.
Ukukhula ngentloko kokuthunyelwa kwamanye amazwe ngokweedola kunyuke kwaya kwi-9.9 yepesenti ngonyaka ngoSeptemba ukusuka kwi-9.5 yeepesenti ngo-Agasti, ephawula inyanga yesithandathu ilandelelana yamanani okuthumela ngaphandle aphezulu kuqikelelo lweemarike.
Ukungenisa elizweni, okwangoku, kunyuswe ngepesenti ye-13.2 ukusuka kunyaka ongaphambili, kuguqula ukwehla kweepesenti ze-2.1 ngonyaka-ngo-Agasti, ngaphezulu kokulindelweyo kweemarike kunye nokunciphisa intsalela yorhwebo ephambili kwi-US $ 37 yezigidigidi ngoSeptemba ukusuka kwi-US $ 58.9 yezigidigidi ngo-Agasti.
Ukomelela kwe-China kuthunyelwe kumazwe angaphandle kuqhutywa ikakhulu bubume bayo njengoqoqosho lokuqala kwaye okokuqala kubhubhane lwe-COVID-19, oluthe lwanegalelo kunyuka lokuthumela ngaphandle kwe-PPE (izixhobo zokuzikhusela) kunye nomsebenzi / isifundo-iimveliso zasekhaya , ngelixa abo babekhuphisana nabo babesaxinekile kubhubhane, ngokwe nkampani yeenkonzo zezimali uNomura.
Ukukhula kokuthumela ngaphandle e-China kungahlala kuphakanyisiwe kwezinye iinyanga ezimbalwa ngenxa yamaza aphindaphindiweyo e-COVID-19 phesheya kolwandle, utshilo u-Lu Ting, ingcali yezoqoqosho e China e-Nomura. "Kwelinye icala, ukuphucuka koSeptemba ekukhuleni kokungenisa elizweni uninzi lwezona zinto ziphambili ngokuhambelana nomthamo kuphakamisa ukuqiniswa kwebango lasekhaya kunye nokubuyiselwa kwakhona."
UGoldman Sachs ulindele ukuba amandla okuthumela kwelinye ilizwe aqhubeke kwiinyanga ezizayo kwaye ukungenisa ngaphakathi nako kungaqhubeka nokwanda kumqolo wokubuyela kwimeko yesiqhelo kwimisebenzi yasekhaya.
Kwikota yokuqala yokuqala yowama-2020, urhwebo lwangaphandle ngokubanzi lwandiswe nge-0.7 yepesenti ngonyaka ukuya kuthi ga kwi-23.12 yezigidigidi ze-yuan (i-US $ 3.43 trillion), kunye nokuthumela ngaphandle kudibanisa ukuya kwi-12.71 trillion yuan, ukwanda kweepesenti ze-1.8 ukusukela kunyaka ophelileyo, ngelixa ukungenisa ngaphakathi itsalwe nge-0.6 yeepesenti ukuya kwi-10.41 trillion yuan, utshilo uLawulo Jikelele lweeMpahla ngoLwesibini.
"Xa ujongene nefuthe elibi lobhubhane we-COVID-19, i-China iqinise impendulo yayo yomgaqo-nkqubo omkhulu, yenze iinzame eziqinileyo zokuqinisekisa uzinzo kwimida emithandathu kunye nokhuseleko kwiindawo ezintandathu," utshilo uLi Kuiwen, umlawuli wesebe leenkcukacha zamanani.
"Senze impumelelo enkulu kuthintelo nakulawulo lwendyikityha nakuphuhliso lwezoqoqosho nakwezentlalo, kwaye isiphumo semigaqo-nkqubo kuzinzo kurhwebo lwangaphandle saqhubeka ukubonakala, kunye nokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kubhetele kakhulu kunokuba bekulindelwe," utshilo uLi.
Emva kokufumana umothuko kwikota yokuqala, ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kunye nokuthunyelwa kwelinye ilizwe kufunyenwe ikakhulu kwixesha lika-Epreli-Juni nangona besathumela ukwehla kancinci ngonyaka.
Kwikota yesithathu, ukungenisa kurhwebo lwangaphandle e-China kunye nokuthunyelwa kwelinye ilizwe kongezwe ukuya kwi-8.88 yeetriliyoni yuan, inyuka nge-7.5 yeepesenti ngonyaka, phakathi kokuthunyelwa kwamanye amazwe inyuke nge-10.2 yeepesenti ukuya kwi-5 yezigidi zezigidi ze-yuan kwaye ukungenisa ngaphakathi kwaqhubela phambili nge-4.3 yeepesenti ukuya kwi-3.88 yeetriliyoni yuan. Onke la manani mathathu aphezulu kwikota yonke.
Umbutho wamazwe akumazantsi mpuma eAsia yayiliqabane lase China elikhulu kurhwebo kwikota ezintathu zokuqala.
Urhwebo lwangaphandle lwase China kunye ne-ASEAN luye ngaphezulu kwe-3.38 yezigidigidi ze-yuan, ukonyuka kwe-7.7 yeepesenti, ukubala i-14.6 yeepesenti yenani eliphambili lezorhwebo lwangaphandle e-China kwiinyanga ezilithoba zokuqala.
Urhwebo neManyano yaseYurophu longeze kwi-3.23 yezigidigidi ze-yuan, inyuka nge-2.9 yepesenti, isenza iqabane lesibini ngobukhulu kwezorhwebo e-EU e-China. Urhwebo lwase China kunye ne-United States lwaphinde lwenyuka ukusuka ekunciphiseni kwangaphambili, ngexabiso elonyuka ngepesenti ezi-2 ukuya kwi-2.82 yezigidi zeerandi yuan ngelixesha.
Urhwebo kunye namazwe ecaleni kweBelt kunye neNdlela, okwangoku, ikhule ngepesenti eyi-1.5 ukuya kuthi ga kwi-6.75 trillion yuan.
Amasiko abalaselisa ukukhula ngokukhawuleza kurhwebo lwangaphandle ngamashishini abucala. Kwikota ezintathu zokuqala zonyaka, banegalelo lilonke le-10.66 yezigidigidi ze-yuan kuthunyelwe ngaphakathi kunye nokungeniswa e-China, ukuya kuthi ga kwi-10.2 yeepesenti ngonyaka, kubalwa iipesenti ezingama-46.1 zexabiso lokurhweba langaphandle lilonke elalingama-4 eepesenti ngaphezulu kunalowo ixesha kunyaka ophelileyo.
Kweli nani lilonke, amashishini abucala athumele ukuthunyelwa ngaphandle kwe-yuan eyi-7.02 yezigidi, ukonyuka okuqatha kweepesenti ezili-10, kubalwa iipesenti ezingama-55.2 zexabiso elipheleleyo lokuthunyelwa kwamanye amazwe e-China, ngelixa ukungenisa kwamanye amazwe kunyuke ngepesenti ye-10.5 ukuya kwi-3.64 yeetriliyoni yuan, kubalwa iipesenti ezingama-35 ze Intloko engenisa elizweni.
Kwangelo xesha linye, amashishini atyala imali kumazwe angaphandle abenegalelo kuthengiso kunye nokuthunyelwa kwelinye ilizwe kwe-8.91 trillion yuan, ebala iipesenti ezingama-38.5. Ukungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kwamashishini aphantsi korhulumente kuphume ngaphezulu kwe-3.46 yezigidigidi ze-yuan kwi-akhawunti ye-15 yepesenti yetotali iyonke.
Ubume bepateni yorhwebo buqhubekekile buqiniswa, ngenxalenye yorhwebo jikelele kurhwebo lwangaphandle jikelele lukhula lukhulu, utshilo uLi.
Kwiinyanga ezilithoba zokuqala, urhwebo jikelele lwase-China lonyuke nge-2.1 yeepesenti ukuya kwi-8.55 yezigidigidi ze-yuan, ebala i-60.2 yeepesenti kuthengiso kunye nokuthunyelwa kwelinye ilizwe ebeli-0.8 yepesenti ephezulu kunakwelo xesha linye kulo nyaka uphelileyo.
Ngokwamashishini, ukuthunyelwa kwamanye amazwe kwizixhobo zokuthintela ubhubhane, iilaptops kunye nezixhobo zekhaya zenziwe kakuhle, ngenxa yotshintsho kwindlela yokuphila eziswe ngulo bhubhane.
"Ukuphehlelelwa kweemveliso ezintsha ze-elektroniki zabathengi kunye nokufunwa kwezixhobo zekhaya eziye zanyusa ukungenisa ngaphakathi kunye nomjikelo wemveliso," utshilo uBetty Wang, uqoqosho oluphezulu lwase China e-Australia naseNew Zealand Banking Group.
U-Nomura's Lu ukholelwa kwelokuba imfuno zeelaptops zingahlala ziqinile iinyanga ezimbalwa, “njengoko sesinye sezixhobo ezibaluleke kakhulu ezifunekayo ekufundeni nge-Intanethi, nangona amandla aso enokuthi abe buthathaka njengoko iimodareyitha zifuna ukubuyela esikolweni.”
Kwakhona, inqaku, ukuthunyelwa ngaphandle kwamayeza kunye namayeza ezonyango atsiba iipesenti ezingama-21.8, ngelixa izixhobo zonyango kunye nezixhobo zerocket rocketed 48.2 pesenti.